Biosecurity inochengetedza iyo WTTC Global Summit muCancun yakachengeteka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Musangano Weindasitiri Nhau » Biosecurity inochengetedza iyo WTTC Global Summit muCancun yakachengeteka
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • Mexico Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vamiriri veWTTC vari kugadzirira kuenda kuCancun, Mexico kunopinda 2021 Global Summit yeWorld Travel uye Tourism Council. WTTC yakabatana neMoon Palace Convention Center, Global Rescue neMexico State yeQuintana Roo vakagadzira chirongwa cheBiosecurity kuchengetedza vamiririri vakachengeteka.
Sangano reWorld Travel uye Tourism Council rinoburitsa hurongwa hweHutano neKuchengetedza gungano riri kuuya reWTTC kuCancun, Mexico, Kubvumbi 25-27, 2021
Anokunda chaiye muchiitwa ichi kuratidza musangano wakachengeteka panguva yeCOVID-19 Global Rescue, kambani yekuUS inopa hutungamiriri uye kununura kunhume kana zvichidikanwa.
Iyo hutano uye chengetedzo chirongwa chakagadzirwa neWTTC uye neQuintana Roo State Hurumende uye inotsanangura matanho akatorwa nekamubatanidzwa Biosecurity komiti yekugadzira yakachengeteka nharaunda / bubble ye2021 WTTC Global
Komiti yakabatana yeBiosecurity inogadzira yakachengeteka nharaunda / bubble ye2021 WTTC Global Summit, Moon Palace Convention Center, Cancun, Mexico.
Heano marongero anopinda nhume dzakagamuchirwa nhasi kubva kuWTTC.
Usati waenda parwendo rwako, tinokurudzira zvikuru kuti: